सम्पादकको छनोट - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
श्रेणी: सम्पादकको छनौट
सम्पादकको पिक 18 सक्छ, 2021 17 सक्छ, 2021 फिल्ममेना मेले	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक 17 सक्छ, 2021 14 सक्छ, 2021 रोन वुल्फ	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक 17 सक्छ, 2021 14 सक्छ, 2021 रेयान मोरिस	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक 16 सक्छ, 2021 14 सक्छ, 2021 डेभिड ज्याक्सन, एमबीए	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक 15 सक्छ, 2021 12 सक्छ, 2021 उदय ट्या tank्क	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक 15 सक्छ, 2021 12 सक्छ, 2021 म्याकेन्जी जोन्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक 14 सक्छ, 2021 12 सक्छ, 2021 हव्वा एन्डरसन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
जागिरको लागि अन्तर्वार्ताको लागि जानु डरलाग्दो लाग्न सक्छ, अझ यो यदि तपाइँ पहिलो पटक रोजगारीको लागि आवेदन दिनुभएमा। जबकि, विस्तृत अनुसन्धान, विस्तृत तयारी, र सावधानीपूर्वक योजनाको साथ, तपाईं यो निश्चित गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंले उडान र colorsहरूसँग तपाईंको कामको अन्तर्वार्तालाई पारित गर्नुभयो। तल, हामी तपाईंको रोजगार अन्तर्वार्ताको तयारीका लागि पाँच चरणहरू सूचीबद्ध गर्दैछौं र त्यो पेशकश भूमिमा।
सम्पादकको पिक 14 सक्छ, 2021 12 सक्छ, 2021 ढोका काम गर्दै	टिप्पणी छोड्नुहोस्
अब, व्यवसायहरू साइटमा काम पुन: सुरू गर्दै छन्, यसको मतलब यो समय हो फेरि शारीरिक सुरक्षाको बारे सोच्नुहोस्। दिमागमा रहेको साथ, यहाँ मुख्य सुरक्षा खतराहरू र उनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने बारे द्रुत रुनडाउन छ।
सुरक्षा दृष्टिकोणबाट, बर्बरताका साथ मुख्य समस्या यो हो कि यसले अधिक गम्भीर अपराधीहरूका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, यदि एक भान्डल एक विन्डो चकनाचूर भयो, तब एक चोर भित्र आउन सक्छ।
सम्पादकको पिक 13 सक्छ, 2021 12 सक्छ, 2021 फिल्ममेना मेले	टिप्पणी छोड्नुहोस्
आन्तरिक राजस्व सेवाले अमेरिकी उद्धार योजना ऐनमा केही मुख्य कर प्रावधानहरूको एक सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ।
धेरै प्रावधानहरूले २०२० कर फिर्तीलाई प्रभावित गर्दछन् र यस दाखिल मौसममा मानिसहरू भरिएका छन्, जसमा एउटा करबाट १०,२०० डलरसम्म बेरोजगार क्षतिमा छुट दिइन्छ र अर्कोले संघीय वा राज्य स्वास्थ्य बीमा बजार मार्फत अनुदानित स्वास्थ्य कभरेज खरीद गर्ने धेरै व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। थप रूपमा, कानूनले आर्थिक प्रभाव भुक्तानको तेस्रो चरण पनि समावेश गर्दछ, अब योग्य अमेरिकीहरू बाहिर जाँदैछन् जुन प्रायः प्रति व्यक्ति for १2020०० को बराबर हो, साथै कर -२०१२ का लागि अन्य प्रमुख परिवर्तनहरू।
सम्पादकको पिक 12 सक्छ, 2021 11 सक्छ, 2021 ढोका काम गर्दै	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सुरक्षामा रहेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको आँखा खुला राख्न सधै प्रशिक्षण दिइन्छ, तर कानमा खोल्ने कुरामा कम जोड दिइन्छ।
निम्न शब्दहरू लेख्न यो स्पष्ट देखिन्छ, ट्रिट पनि हुन सक्छ, तर राम्रो श्रवण कौशल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरण हो कुनै पनि प्रभावी संचारकसुरक्षाको क्षेत्रमा विशेष गरी ती।
सम्पादकको पिक 12 सक्छ, 2021 11 सक्छ, 2021 जेफ रोमेरो	टिप्पणी छोड्नुहोस्
वास्तविक घर जग्गामा अहिले आगो छ भन्नु भनेको एक सीमितता हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले अहिलेको अनुभव गरिरहेको दरमा कहिल्यै घर जग्गा कारोबारको अनुभव गरेको छैन। आर्थिक अवसर र ऐतिहासिक रूपमा कम ब्याज दर द्वारा संचालित, घरमालिकहरु पहिले भन्दा पहिले देखीएको भन्दा र लगभग सबै राज्यहरु मा उच्च राजस्व मा सम्पत्ति अफलोडिंग छन्। के एक पटक $ 300,000 घर थियो अब $ 800,000 वा अधिक बेच्न सकिन्छ। र जहाँ यो मूल्य निर्धारण भारी क्यालिफोर्निया र टेक्सास जस्ता धेरै जनसंख्या भएको राज्यहरूमा हुने गर्दछ, यो अब अमेरिका भर भइरहेको छ।
सम्पादकको पिक 11 सक्छ, 2021 10 सक्छ, 2021 एलेक्स बेल्से	टिप्पणी छोड्नुहोस्
हामी सबै 'नयाँ सामान्य' मा समायोजन गर्दैछौं। विश्वभर एक अशान्तिपूर्ण अवधि पछि, धेरैले अब सकारात्मक कदमहरू लिइरहेका छन्: राष्ट्रिय लकडाउन वा प्रतिबन्धहरूबाट आउने र नियमित दिनचर्यामा फर्कने।
तर यो 'सामान्य' नयाँ छ। हाम्रो पुरानो बानी र दिनचर्यामा फर्कनु पहिले नै उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको छ, नयाँ परिस्थितिलाई जन्म दिन्छ जुन हामी सबैलाई सचेत हुनुपर्दछ। तल, हामी यातायातको संसार भित्र जान्नका लागि पाँच मुख्य चीजहरू पत्ता लगाउँदछौं जुन यस नयाँ वातावरणमा तपाईंको यात्रा र ड्राइभलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
सम्पादकको पिक 10 सक्छ, 2021 8 सक्छ, 2021 म्याकेन्जी जोन्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यो बढि बढि हो जब टोली सधैं तालिका पछि हुन्छ। तपाईले कहिले पक्रनु हुन्न जस्तो देखिन्छ, तपाई जे भए पनि। तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँका कर्मचारीहरू उत्पादक हुन सक्षम छन्; समस्या यो हो कि तपाईंलाई थाहा छैन कसरी त्यसो गर्न तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने। कर्मचारीको संलग्नता अब कार्यस्थल उत्पादकता निर्धारणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये एक हो जुन अन्ततः तपाईंको कम्पनीको सफलताको लागि नेतृत्व गर्दछ।
सम्पादकको पिक 10 सक्छ, 20217सक्छ, 2021 सियरा पावेल	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक 8 सक्छ, 20216सक्छ, 2021 शेरिल राइट	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक7सक्छ, 20215सक्छ, 2021 एलेक्स बेल्से	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक7सक्छ, 20215सक्छ, 2021 स्टेफनी स्नाइडर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक6सक्छ, 20214सक्छ, 2021 सियरा पावेल	टिप्पणी छोड्नुहोस्
गर्मी बाहिर निस्किनु र परिवार संग रमाईलो गर्न वर्ष को सही समय हो। केही नयाँ मनोरन्जन गतिविधिहरूमा भाग लिंदा तपाईं र तपाईंको परिवारलाई नयाँ साहस प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। यस गर्मीमा कुनै पनि रमाइलो पारिवारिक गतिविधिहरू प्रयास गरेर, तपाईंसँग सर्जनको उत्तम पक्षहरूको आनन्द लिई आफ्नो प्रियजनहरूसँग समय बिताउने बढी रचनात्मक र रोचक तरिकाहरू छन्।
सम्पादकको पिक6सक्छ, 20214सक्छ, 2021 रेयान मोरिस	टिप्पणी छोड्नुहोस्
तपाईंको दन्त स्वास्थ्यले तपाईंको समग्र स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यदि तपाईंले दाँतको ख्याल राख्नुहुन्न भने, तपाईंले श्वासप्रश्वास समस्या, हृदय रोग, र डिमेंशिया विकासको संभावना बढाउनुहुन्छ। यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईले आफ्नो मौखिक स्वास्थ्यलाई शीर्ष पायदान अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको दाँत तीन पटक दैनिक ब्रश गर्नुहोस्
तपाईंले खाएको हरेक खाना पछि तपाईंले दाँत माझ्नु पर्छ। यसले खानालाई दाँत माझ्नबाट रोक्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको दाँत सफा गर्ने गुणस्तर पनि सुधार गर्दछ। यसको कारण यो हो कि तपाईंले हटाउन खोज्नु भएको खाना भनेको तपाईंले खाना खानुहुन्छ जस्तो खाएको छ जुन केही समयको लागि त्यहाँ बसिरहेको छ।
सम्पादकको पिक5सक्छ, 20213सक्छ, 2021 ईसा शार्लोट	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक2सक्छ, 20212सक्छ, 2021 एलेक्स बेल्से	टिप्पणी छोड्नुहोस्
विश्वभरि, COVID-19 महामारीको कारण राष्ट्रिय लकडाउनका कारण धेरै मानिसहरू आफ्नो घरहरूमा सिमित भएका छन्। तर जब प्रतिबन्धहरू उठ्न थाल्छन्, धेरैको लागि उत्साहको भावना निर्माण हुँदैछ!
लकडाउन समाप्त भएपछि के गर्ने त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, तर तपाईं कहाँबाट सुरू गर्नुहुन्छ? त्यहाँ चीजहरू छन् जुन तपाईंले गुमाउनुभएको छ, फिर्ता जानको लालसा, र जारी राख्नको लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैन, तर यसलाई महत्त्वपूर्ण बनाउन तपाईंको समय र ऊर्जा व्यवस्थित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
सम्पादकको पिक 1 सक्छ, 20212सक्छ, 2021 रेयान मोरिस	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यदि तपाईं घर र तपाईंको परिवारको लागि तपाईंको जीवन सजिलो बनाउन घर मर्मत विधिहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सही ठाउँमा आउनुभयो। यद्यपि यो सामान्यतया सरल देखिन्छ, घरको सुन्दर सजावट कायम राख्ने - विशेष गरी जब बच्चाहरू र घरपालुवा जनावरहरू त्यहाँ वरिपरि छन् - निराश हुन सक्छ। जहाँसम्म, धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई थोरै प्रयासको साथ गर्न व्यवस्थित गरेका छन्, र त्यहाँ पनी कुनै कारण छैन कि तपाईंले पनि यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यहाँ धेरै सुझावहरू र युक्तिहरू छन् जुन तपाईं लागू गर्न सक्नुहुनेछ यस वर्ष सफा, स्वस्थ र व्यवस्थित परिवारको घर राख्नको लागि, र शीर्ष व्यक्तिहरूले निम्न समावेश गर्दछ:
सम्पादकको पिक 1 सक्छ, 20212सक्छ, 2021 शेरिल राइट	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यदि तपाईं बाल विकासमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईंको क्यारियर अवसरहरू अनन्त छन्। चाहे तपाईं बच्चाहरू, वयस्कहरू, वा पर्दा पछाडि काम गर्न चाहानुहुन्छ, बाल विकास डिग्रीले तपाईंको भविष्यको लागि बिभिन्न विकल्पहरू प्रदान गर्दछ।
बाल जीवन विशेषज्ञहरु
एक इनामदायी स्थिति जसले तपाईंलाई बच्चाहरू र आमा बुबाको साथ सम्पर्कमा राख्दछ एक बच्चा जीवन विशेषज्ञको हो। बाल जीवन विशेषज्ञहरु स्वास्थ्य सेवामा परिवारको सहायता गर्न काम गर्छन् तिनीहरूले बच्चाको बिमारी, अशक्तता वा अस्पतालमा भर्ना गर्छन्। तिनीहरू परिवारलाई विनाशकारी चिकित्सा घटना घेरिएको आघातको सामना गर्न सहयोग पुर्‍याउन आवश्यक भावनात्मक सहयोग प्रस्ताव गर्दछन्।
G उपहार तपाईंको छोरीले प्रेम गर्नेछ
सम्पादकको पिक अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 27, 2021 लिजी होवार्ड	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यदि तपाइँको छोरी छ भने, तब तपाइँलाई थाहा छ तपाइँ तपाइँको उपहार हुन चाहानुहुन्छ विशेष। केटीको बाबुआमा हुनु आफैमा अनमोल उपहार हुन्छ, त्यसैले पक्कै पनि तपाई उनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ। यद्यपि सही उपहार फेला पार्न गाह्रो हुन सक्छ। यस लेखमा, तपाईले पाँचवटा सबैभन्दा रचनात्मक र विशेष उपहार पाउनुहुनेछ जुन कि केही खर्च लाग्दैन।
Ious घरबाट काम गर्ने कसैको लागि गम्भिर रूपमा उपयोगी उपहार
सम्पादकको पिक अप्रिल 29, 2021 अप्रिल 28, 2021 म्याकेन्जी जोन्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
धेरै व्यक्तिको लागि, कामबाट घर जीवन एक अनुभव थिएन जुन तिनीहरूले सुरुमा छनौट गरे। जहाँसम्म, थकाउने अवस्थाका कारण धेरै व्यक्तिहरू काम गर्ने यो नयाँ तरीकामा समायोजन हुँदैछन्। अधिक कम्पनीहरूले पूर्ण आकार लीज नवीकरणलाई आकार घटाउने वा रद्द गर्ने रूपमा, अधिक कर्मचारीहरू स्थायी रूपमा घरबाट काम गर्दछन्। यदि तपाईलाई चिनेको कसैको लागि यो वास्तविकता हो भने, त्यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन तपाईलाई यस संक्रमणमा समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कल गर्न र सुन्न कान बन्न सक्नुहुन्छ यदि तिनीहरूले वेंन्ट गर्नु पर्छ भने। तपाईं यी अविश्वसनीय उपयोगी उपहारहरू पनि प्रस्ताव गर्न सक्नुहुनेछ किनभने उनीहरू टाढाको जीवनमा समायोजन गर्छन्।
एक रिटेल स्पेस खरीद गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा
सम्पादकको पिक अप्रिल 29, 2021 अप्रिल 28, 2021 भिक्टोरिया स्मिथ	टिप्पणी छोड्नुहोस्
तपाईं ठूला सपनाहरूका साथ उद्यमी हुनुहुन्छ। तपाईको उत्पादन र सेवाले तपाईको घर बाहिर काम गरेको बेला तपाईलाई अनलाइन बढावा दिईरहेको छ। तपाईंले आफ्नो ठाँउ बढ्नुभयो। यो डुबकी लिन र तपाइँको आफ्नै खुद्रा सम्पत्ति खरीद गर्ने समय हो। यो एक ठूलो निर्णय हो जुन हतारमा कहिल्यै गर्नु हुँदैन। निम्न विचारहरू लिनुहोस् तपाईले धितो राखीएको लाइनमा हस्ताक्षर गर्नु अघि धितो राखी आउने बर्ष तपाईसंगै आउने छ।
तौल गुमाउनुहोस् र यी १ Amaz आश्चर्यजनक खाद्यहरूको साथ पूर्ण महसुस गर्नुहोस्
सम्पादकको पिक अप्रिल 28, 2021 अप्रिल 26, 2021 नीना साइमन्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
एक खाना को बीच एक सही सन्तुलन पत्ता लगाउनु भयो जसले तपाईंलाई पूर्ण महसुस गराउँदछ र एक जसले तपाईंलाई सबै आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरू प्रदान गर्दछ कि स्वस्थ तरिकामा वजन कम गर्न महत्वपूर्ण छ। यी आश्चर्यजनक खानाहरूले तपाईंलाई आवश्यक सबै पोषकहरू समावेश गर्दछ र सजिलैसँग तपाईंको दैनिक भोजनहरूमा समाहित गर्न सकिन्छ।
सम्पादकको पिक अप्रिल 26, 2021 अप्रिल 23, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
फिल्टर तपाईंको पल्म्बिing प्रणालीमा एक अत्यावश्यक ग्याजेट हो। यसले तपाईंको गृह प्रणालीको हार्ड पानीबाट दूषित पदार्थहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले अजीब गन्धको साथ पानी नरम र अनावश्यक रसायन हटाउन मद्दत गर्दछ। त्यसकारण, तपाईंले घरमै पानी फिल्टरहरू स्थापना गरेको कुरा निश्चित गर्नुपर्दछ।